Kabtan Ramos Oo Amaan Kow Uga Siiyay Lionel Messi %
Kabtanka kooxda kubada cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa wuxuu soo bandhigay inuu uqirsan yahay in Lionel Messi uu yahay ciyaaryahan shartiisa wata, islamarkaana wax walba oo isbedal ah oo loo baahan yahay sameyn kara.
Ramos oo xalay ka badbaaday inuu Lionel Messi uga hor yimaado kulankii labaad ee xili ciyaareedkan, markii ay wada dheeleen Spain iyo Argentina oo La Rojo ay 6-1 kusoo adkaatay ayaa waxaa uu sheegay in Argentina aysan waxba ahayn la’aanta Messi.
Wuxuu carabka ku dhuftay Ramos in hadii Lionel Messi uu joogi ama uu ciyaari lahaa kulankaan uu ugu yaraan wax badan uqaban lahaa wadankiisa, islamarkaana uu yahay ciyaaryahan leh waxyaabo gaar u ah isaga.
“Lionel Messi waa ciyaaryahan wayn oo wanaagsan, kaasoo leh waxyaabo gaar u ah,” ayuu Ramos usheegay warbaahinta kadib ciyaartii xalay.
“Hadii uu isaga ka maqan yahay Argentina waxay tahay mid liidata, laakiin hadii uu isaga la jiro, waa kuwa xoog badan,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
Sikastaba, Lionel Messi ayaa wuxuu xalay uga maqnaan xulkiisa Argentina dhaawac dhanka Muruqa ah, waxaana ay taasi sababtay in lagu soo karbaasho 6-1 – Xidiga Real Madrid ee Isco ayaa dhaliyay Saddex kamid ah Lixdaan gool.
Dhanka kale, warbaahinta dalka Argentina oo si xoogan uga falcelisay xasuuqaan loo geystay wadankooda ayaa waxay ku tilmaameen wax aan loo dulqaadan karin, iyagoona ugu baaqay xiriirka kubada cagta Argentina inuu isbedalo sameeyo.
MessiRamosSpain vs Argentina
Dembele Oo Xalay Dhibane U Noqday Jamaahiirta Ruushka [Sabab]